PARSHOOTA - ပိုပြီးမကြာသေးမီကရုရှားအဆိုတော်နှင့်, မင်းသမီးဂျူလီယာ Parshuta လူသိများထိုကဲ့သို့သောဖန်တီးမှု name ကိုအောက်မှာ။ သူမသည်ဒေသခံလူငယ်တစ်အဆိုတော်တွေရဲ့ရာပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြီးထွားဖို့မယုံနိုင်စရာအလိုဆန္ဒတို့တှငျအထွက်ကိုဆိုလိုတာပါ။ ရိုးရှင်းသောထံမှအပြတ်အသတ်ကာမဂုဏ်လိင်မှ - သူမကအမြဲတမ်းမူရင်းသစ်ပုံရိပ်တွေအပေါ်ကြိုးစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမအကြိမ်ကြိမ်ဝတ်လစ်စလစ်လူကြိုက်များထုတ်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ကမ်းလှမ်းကြောင်းလုံးဝသဘာဝက။ နှင့် 2011 ခုနှစ်ကျဆုံးသူမသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ မယုံနိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုမိန်းကလေးနှင့်သူမ၏အခွက်တဆယ်မျက်နှာစာဖြစ်ပါသည် - လုပျသငျမဂ္ဂဇင်းများအတွက်တစ်ဦးကလင်းလင်းဓာတ်ပုံတစ်ဖန် Yulia Parshuta ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
ဂျူလီယာ 1988 ခုနှစ်ဆိုချီမြို့၌မွေးဖွားခဲ့သည်။ တော်တော်မျက်နှာ, ဂန္ထဝင်ကခုန်တွေနဲ့ညှို့နှင့်မနာသီချင်းဆိုရန်ငွေတံဆိပ်နှင့်အတူကျောင်းကိုပြီးအောင်မှမိန်းကလေးတားဆီးနှင့်ပြည်သူ့ချစ်ကြည်ရေးတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်လာမပေးခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါအခင်းဖြစ်ပွားရာအမြဲသူမ၏ဆွဲဆောင်ဒါကြောင့်သူမ KVN အတွက်ကစားတက္ကသိုလ်, တင်ဆက်၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတွက် dabbled အမျိုးမျိုးပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ခဲ့။ ဂျူလီယာ - ပြိုင်ပွဲ၏ပြိုင်ပွဲ "မော်စကို၏ Crystal Crown" (2004), ဆုရှင် "ဟုအဆိုပါ MTV VJ ဖြစ်လာ" (2007) ၏အဓိကဆု, ပြပွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတို့သည်ဤလောကသို့သူမ၏လက်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်သောသတ္တမ "American Idol" ၏ဗိုလ်လုပွဲ၏ဆုရှင်ပါ။ 2007 ခုနှစ်တွင် Parshuta ကို "ယဉ်-ယန်" ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ပေမယ်သာလေးနှစ်ပြီးနောက်တစ်ကိုယ်တော်အဆိုတော်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိကြိုးစားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူမရဲ့ပထမဦးဆုံးအလုပ်တစ်ခုတည်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သီချင်းကို "ဟဲလို" ခဲ့ "သင်တို့သည်ငါ့စကားဝှက်ကိုပါပဲ။ " သင့်ရဲ့အခွက်တဆယ်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ပရိသတ်ကိုအောင်နိုင်စေခြင်းငှါ, အဆိုတော် New York မှာလေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ပထမဦးဆုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသီချင်းထိခိုက်လာတယ်, အကြီးဆုံးစံချိန် LEBL Sony ကဂီတဖျော်ဖြေမှုများထဲမှ 2013 ခုနှစ်တွင်ဂျူလီယာနှင့်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ယနေ့တွင် Yulia Parshuta ဒရာမာကျောင်းကဂျာမန် Sedakov ၏ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်တီဗီစီးရီး "အလှအပ" တွင်သရုပ်ဆောင်ဖို့စီမံခန့်ခွဲခြင်း, 2014 မှာ, ကြည့်ရှုအဆိုပါ feature ကိုရုပ်ရှင်များတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍများထဲမှတစ်ဦးသဘင်အဖြစ်မြင် "ဟုမင်းသမီး၏နက်နဲသောအရာ။ " ဒီအယောင်ဆောင်မင်းသမီးငှားရမ်းထားဒါရိုက်တာအလက်ဇန္ဒား Hwang ပြီးနောက်။ နောက်ဆုံး kinoraboty ဂျူလီယာ Parshuto - Yule စိတ်ကူးယဉ်ဟာသ "ဖျော်ယမကာစပ်" တွင်အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍ, ဒိန Shturmanovoy ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
ဂျူလီယာ Parshuta "လုပျသငျ" မဂ္ဂဇင်းအတွက်ကစားရန်ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံခဲ့သည်ပြီးနောက်ကနူးညံ့သိမ်မွေ့နံနက်မူဆယ်၏ပုံရိပ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြယ်ပွင့်ပုံကြမ်းပြပွဲ "လူငယ် Give!" တစ်ဦးကြည်လင်ပြတ်သားစွာအဖြူကြသူများ ဇာအတွင်းခံအဝတ်အစား များနှင့်ကြီးမားသောအိပ်ရာနှင့် chiffon တစ်ပွင့်လင်းမြတ်သောနှင့်အတူနေရာများတွင်တိုက်ခန်းရိုက်ကူးစတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့အတွင်းခံအဝတ်အစားမှအဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်ဖို့အဆိုတော်များအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဂုဏ်အသရေပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်သူနှင့်အမျှ အလုပ်လုပ်ကိုင်မော်ဒယ် , သူမအကြိမ်ကြိမ်ရေချိုးဝတ်စုံအတွက်ညစ်ညူးစေခဲ့သည်။ ဂျူလီယာသူမ၏ဓာတ်ပုံနှင့်အတူအဖုံးအပေါ်ကန့်ကွက်လျှင်စောင်ရေအတွက်ဟိုတယ်ထွက်ခွာမှီ, အယ်ဒီတာချုပ်က, ကမ္ပည်းစာ "အကောင်းဆုံးပေါ့ပ်တိုင်းပြည်!" ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည် unabashedly သူမစိတ်ထဲမပြုခဲ့ဟုဆိုသည်။ ထိုအပင်သူမကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများ၏စုံလင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိတယ်ဇော်လင်းက။ အဆုံး, "လုပျသငျ" မဂ္ဂဇင်းအတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတွင် - အယ်ဒီတာအဖွဲ့န်ထမ်းအဆိုတော်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်အဘယ်သို့ဂျူလီယာ Parshuta စမတ်မိန်းကလေးသရုပ်ပြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။
အလုပျသမဂ္ဂဇင်းတွေအတွက်ဓါတ်ပုံကိုရိုက်ကူးအတွက် Olivia Wild
Nastasya Sambursky - ဓာတ်ပုံ 2014
ဓာတ်ပုံက Anna Koshmal 2013
သူ့ခန္ဓာကိုယ် Yulia သံသယ၏စုံလင်ခြင်း။ ကသွေးဆောင်ကြည့်ကြောင်း, သူမမကြာခဏအားကစားရုံသွားပြီးအစားအသောက်များတွင်နောက်လိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ နှစ်ဆယ်ခုနစ်မိန်းကလေးအောင်မြင်စွာနိုဝင်ဘာလမဂ္ဂဇင်းကြောင်းသေချာစေရန်အလို့ငှာ "လုပျသငျ" လွှတ်ပေးရန် 2011 ခုနှစ်အတွက်လုံလောက်သောကိုရှာဖွေ, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြခန်းကိုကြည့်ရှုရန်, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မျက်ခုံး Megan Fox က
အတ္ထုပ္ပတ္တိဂျစ် macron - မာစတာကနေသမ္မတကတော်ဖို့လမ်းကြောင်း
Irina Shayk - ကမ်းခြေပေါ်ဓာတ်ပုံ
Vera Brezhnev - ဆံပင်
Ani Lorak ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူး 2013
မိတ်ကပ် Miley Cyrus ရဲ့
အဘယ်အရာကို3ရက်ကြာပရာ့ဂ်၌အကွညျ့အရှု?
စာရွက် - ချယ်ရီချဉ်
မီးဖို၌အချဉ်မုန့်နှင့်အတူကိတ်မုန့် - စာရွက်
မျိုးချစ်စိတ် - အဘယ်ကြောင့်မျိုးချစ်စိတ်တစ်အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးသနည်း